I-Chat yevidiyo # 1 - I-ChatRut
Ikhamera kumele inikwe amandla! Lokhu kulungiselelwa kuzohlala kunikwe amandla kuze kube yilapho ubuso bakho bubonakala ngokucacile kuhlaka. Uma lesi simo siphulwa, umsebenzi ukhutshaziwe ngokuzenzakalelayo.
Tshela abangani bakho mayelana nengxoxo yakho engxoxweni yevidiyo ozithandayo manje!
Chat Roulette - ukukhulumisana kwekhwalithi nokulula nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma ubusuku
Njengoba izazi zezenhlalo zithi, izinkinga ezinkulu zabantu banamuhla ziyizingxabano kanye nezingqinamba zangaphakathi ezivimbela ukuxhumana okugcwele. Siphila kanjani? Ikhaya, umsebenzi, isitolo esikhulu ngempelasonto, i-TV noma i-intanethi kusihlwa, ngezikhathi ezithile - imibuthano kanye nozakwethu. Kulukhuni kakhudlwana uku "cindezela" ukuxhumana nokuxhumana komuntu ngendlela yokuphila evamile. Ukuba nesizungu kungumphumela oyinhloko wokusondelana kwethu nokulahlekelwa kwamakhono okukhuluma nokuzwa. Kodwa injabulo yethu siqu ngokuqondile ixhomeke ekutheni ikhono kanye nokujwayela kokuxhumana - kuphi ukuthola umlingani womphefumulo, isithandwa samantombazane noma intombazane enkulumweni enhle, engeyona ebophayo? Siyaba namahloni futhi sivaliwe, asihlangabezi emgwaqweni, sidlulise isisebenzi esikhangayo esivela emnyangweni oseduze, ungaqapheli ukuya kumuntu ongowokungazi kahle e-cafe. Ingabe ikhona indlela yokuphuma kulo mjikelezo ononya ononya? I-intanethi, isithwathwa esinonya sesikhathi sethu, esingavamile, singasisiza! Sidalwe ngokukhethekile kithi i-Roulette yengxoxo yevidiyo, eyenzelwe ukusinika into ebaluleke kakhulu ekuphileni kwethu - ukukhulumisana.
Video Roulette - ulwandle lwamathuba okuxhumana kwakho
Ukuphi ukuxoxa ngevidiyo futhi kungakusiza kanjani? Okokuqala, lokhu kukhulumisana bukhoma nabantu abathakazelisayo ngesikhathi sangempela. Ngokuphelele, ungaxoxa nganoma yiziphi izihloko nabantu abangabazi kwenye indawo ekupheleni kwezwe, wabelane ngemizwa yakho kanye nokuhlangenwe nakho, ufunde izinto eziningi ezintsha nezithakazelisayo, uphumule futhi ubalekele imisebenzi yansuku zonke, ekugcineni. Vumelana, lokhu kuyithuba elikhulu kuwo wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi ubulili, ubudala, isimo senhlalo. Kuyini okuthakazelisayo, i-Roulette yevidiyo ihlale iyisici sokumangaza: awukwazi ukuthi kusengaphambili ukuthi uzoxhumana nobani manje noma emizuzwini engu-10. Uhlelo lukhetha ngokuzenzakalelayo i-interlocutor yakho, usebenzisa indlela yezibalo ezingahleliwe! Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukuba nekhamera yevidiyo nomakrofoni ukuxhuma ku-Shihatroulette. Umgomo we-roulette futhi akukho okunye! Kodwa nguye onithwala izihlobo eziningi ezithakazelisayo, ezithakazelisayo nezijabulisayo ezingashintsha impilo yakho.
Siyakwenzenjani? Cishe wonke umuntu!
Sikhuluma ngezinzuzo zikaShat Ruletka, samukela izibonelo ezithile.
Ukunqoba amahloni Abantu abaningi babhekana nobunzima obukhulu bokuxhumana kwangempela: izithiyo zangaphakathi, izinkimbinkimbi, ukunganeliseki ngokubukeka kwazo futhi ngokwabo kuthatha ukuzimisela ukuxhumana nabantu empilweni yangempela. Kodwa ungashintsha impilo yakho ibe ngcono, thola abangane abasha ngisho nangothando lwakho uma unqoba inhloni yakho! I-Chat Roulette 24 iyithuba elihle lokusebenzisa amakhono akho okuxhumana futhi kancane kancane ukuqeda izinkimbinkimbi eziningi zokuxhumana. Kubantu abaningi abanamahloni, iqiniso lokuthi i-interlocutor isemuva kwesikrini sokuqapha kwenza uzizwe ukhululekile futhi uvikelekile kwengqondo. Ngakho-ke, ngokumane ukhulume nabantu ngezihloko ezihlukahlukene, ungazisiza ukuthuthukisa amakhono okuxoxa asebenzayo, izingxoxo ezimnandi ngisho nokudlala ngothando. Ngisho, uzophumelela!
Ukusindiswa kuze kube nini nanini kumatasa. Kubantu bebhizinisi abahlala enkingeni yesikhathi esihlala njalo, inkinga yokuntuleka kokuxhumana kuyindaba ephuthumayo. Imihlangano yebhizinisi, isixazululo sokusebenza isikhathi nozakwethu akubalanga - ngifuna ukubonakala okusha, izihloko ezingakahleleki nezingenakukhonjelwa. I-Roulette yevidiyo 24 yithuba lokuxhuma ingxoxo noma kunini. Isevisi isebenza nxazonke ihora, elifanele kakhulu kubantu abanamahora angasebenzi okungajwayelekile. Uphelile umhlangano ngo-10: 00? Vula ingxoxo yevidiyo futhi uxoxe namanye ama-owls ebusuku. Ingabe unomzuzu wamahhala ngaphambi kokudla kwasemini? Khuluma nalabo abaqashiwe - ngubani, uma kungenjalo, "bayakuqonda futhi bathethelele" isifiso sakho sokuba sesikhathini futhi wenze okusemandleni akho amahora angu-24 ngosuku?
Ithemba ngezinhliziyo ezinesizungu Uma ufuna umphefumulo wakho womshado, kodwa ngesizathu esithile awukwazi ukukuthola empeleni, ungadikibali. I-Chatrulet izokusiza ekufuneni kwakho. Lapha unezindlela eziphakeme kakhulu zokuxhumana nentombazane ekhangayo noma insizwa ethandekayo. Ukuxoxa engxenyeni engavamile yokuxoxa akukudingi lutho! Hlonipha futhi unobungane, futhi nakanjani uzoba nomunye nomunye. Kulesi simo, akukho okuvimbela ukuthi uhlanganyele oxhumana nabo ngomhlangano ungaxhunyiwe ku-intanethi, futhi ubani owaziyo, mhlawumbe lokhu kuyisikhathi sakho?
Help ngesikhashana esinzima. Izikhathi ezinzima, izikhathi ezinzima wonke umuntu unayo, futhi wonke umuntu uyazi ukuthi kunzima kanjani ukukhuthazela ekuzileni. Uma kungekho muntu ongakhuluma ngezinkinga zabo, wabelane ngezinkinga ezibuhlungu futhi usule umphefumulo, ungabekezeleleki ngempela. Ngokuvamile kunzima ngathi ukutshela umndeni nabangane ngezinkinga zethu - zingase zingasiqondi, futhi ubudlelwane nabo buzohlabalala. Ngezinye izikhathi umuntu ongaziwayo nokuphila kwakhe okuhlangenwe nakho kanye nombono wezwe uba ngumqondo wezengqondo. Ngokutshela ingxoxo yakho ye-interlocutor video ukuthi okukhathazayo futhi ikucindezele, ungathola impendulo yombuzo oyinhloko.Ekugcineni, ukukhuluma nje noma ngokuphambene nalokho, kuyasiza kakhulu ukulalela umuntu.
Kubheka ukukhulumisana okuthakazelisayo. Ingabe uthanda ukuxhumana, ukuhlangabezana nabantu abasha, ufunde okuthile okusha nokuwusizo njalo, ukuthola imiphetho emphefumulweni wakho? Khona-ke ingxoxo yevidiyo 24 yilokho okudingayo. Lapha ungaba nengxoxo enhle "mayelana nento", funda okuthile okusha ngalokho okuthakazelisayo kuwe, thola insimu entsha yolwazi, wandise ama-horizons akho. Awukwazi ukuthi iyiphi ividiyochat ezoxhuma nawe! Ingabe ugubha okuthile, futhi u-interlocutor wakho naye? Bese ugoqa izibuko ngokusebenzisa umqapha - kuzokujabulisa nakakhulu! Ulungele ukupheka okuthile okumnandi? Buza umnakekeli wakho ngakolunye uhlangothi lomqapha ukuze uthole iseluleko ngokupheka! Ingabe udoba noma izimoto? Uma unenhlanhla ukuhlangabezana nomthandi ofanayo, ungathola umngane omkhulu impilo yakho yonke!
Ikhwalithi yakho nokuxhumana okuphephile kungaphezu kwakho konke!
Ividiyo ye-Roulette iyinkambu engenamkhawulo wamathuba kuwe! Thola izwe lokuxhumana okubukhoma, wandise ama-horizons akho bese uya ukuhlangabezana nezinto ezintsha! Nathi, sinakekelwa ngekhwalithi yokuxhumana ku-webchat yethu. Ividiyo engu-24 yindawo lapho ulandela khona ngokuqinile imithetho yokuhlonipha futhi ungavumeli ukwephulwa okukhulu kokuziphatha, ukuziphatha nokuziphatha. Ukuze sikuvikele ezikhathini ezingathandeki, siqapha ngokucophelela okwenzekayo ku-intanethi, futhi siqaphe ngezikhathi izikrini zamakamelo ethu okuxoxa. Hlola futhi ulandele imithetho elula yengxoxo yethu yewebhu, futhi ujabulele ukuxhumana okuphezulu nokumnandi. I-roulette yengxoxo - iyathakazelisa, iyathakazelisa, ilula futhi ihlale iwusizo kuwe! Sikulindele nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma ubusuku bokuxhumana okuphezulu nokukhiqiza!
Izingxoxo zevidiyo ezithandwayo kakhulu
I-roulette yokuxoxa ethandwa kakhulu yi-, eyakhiwe ngoNovemba 2009 ngumfundi wesikole waseMoscow u-Andrei Ternovsky, namuhla yigama lomndeni futhi ubeka ithoni yezingcingo eziningi ze-intanethi ezigxile ekuhloleni okungahleliwe kwe-interlocutors.
Ukuvela ezinyangeni ezimbalwa ngaphambili kunomlingani wayo wamazwe omhlaba - Omegle (owadalwa ngomhla ka-Mashi 25, 2009), nguye ongakwazi ukubeka kahle uhlu lwezingxoxo zokuxoxa zezwe lonke. Futhi noma ngabe ukufika kwamanje kweC Chatrulett kunamaphesenti ayishumi ephansi kunalokho okuvezwe khona (abantu abangaba ngu-150 abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.5 ngosuku), lokhu akukuvimbeli ukuba uhlale umholi phakathi kwezinsizakalo zokuphola okungajwayelekile. U-Andrei Ternovsky usasebenza ngesikhulumi, ezama ukwenza ividiyo yakhe ixoxe ngendlela elula ngangokunokwenzeka yokuxhumana. Phakathi kwezinqubo ezintsha zakamuva ingxoxo yokubhalisa (isimemo, imali, njll) kanye nokukwazi ukuvimbela abasebenzisi.
Umntwana wezingane zesikole waseMelika uLeif K-Brooks Omegle.com unikeza abasebenzisi bayo inkululeko eyengeziwe yokusebenza: ngokungafani nomqulu wengxoxo, asikho isidingo sokukhathazeka ngokubhalisa - ukuxhumana akukwaziwa ngokuphelele. Ngengxenye yakho kwesikrini, uzobizwa ngokuthi "Wena" ("Wena"), kanye ne-interlocutor yakho (futhi wena kumuntu) - "Stranger" ("Stranger"). Ungakwazi ukuxhumana noma ngokuxhuma ingxoxo yevidiyo, noma ngokubeka ifomethi yombhalo wengxoxo. Njengama-roulettes onke wengxoxo ethandwayo, u-Omegle uthola i-interlocutors ngendlela yokungahleliwe, kodwa kulabo abafuna ngandlela-thile ucacise ukusesha, kukhona ithuba lokucacisa izintshisekelo zabo. Akudingeki ukuthi, lesi simiso sivumela i-Omegle ukuba ibe umholi ekulinganisweni kwezilaleli zansukuzonke zabantu abangaphezu kuka-220 000?
I-webchat yesithathu ethandwa kakhulu, i-Bazoocam.org, isebenza nomphakathi wesiFulentshi-isiJalimane futhi inezivakashi ezingu-40 000 ngosuku. Izilaleli zaseRashiya mayelana nalokhu ziyi-VideochatRU.com ezithakazelisayo kakhulu, okuyinto nsuku zonke iza ngabantu abangaba ngu-10 000. Le sayithi ayidingi ukubhaliswa okukhokhelwe futhi ihlolwe, evumela ukuthi ungavumeli ukukhulumisana kwezici ezingenele ngokuphelele. Kulabo abadinga ukuqedela ukungaziwa kanye nenkululeko yokuthatha isenzo, kunengqondo ukubheka i-Facebuzz.com - i-American equlette ye-roulette chat, lapho abaxhumanisi bayoba khona ngaphansi kwe-VideochatRU.com, kodwa ngeke kudingeke bakhathazeke ngokulinganisela. Labo abafisa ukuxhumana nabasebenzisi baseRussia abangahleliwe kuyoba usizo ukubheka i-Videomail Mail.ru - isondo lesikhulu lesithandwa kakhulu eRussia. Ingxoxo imisiwe, kodwa ukuxhumana kuyo kuqhutshwa ngolimi lwendabuko.
Ingxoxo yevidiyo 18 ngaphandle kokubhaliswa
Video Roulette 18 Ngaphezu ngaphandle kokubhalisa ukushintshanisana ngokuhlanganyela kwemicabango nemizwa ngenkathi kuxoxwa ngokuzenzekelayo. Lapha ngeke neze ube nesithukuthezi. Uma i-interlocutor yangaphambilini engakujabulisi nganoma yini, yiya kokulandelayo bese uqhubeka nokujabulisa ukuxhumana.
Chatrouletka mahhala futhi ngaphandle kokubhaliswa namantombazane
I-roulette yengxoxo namantombazane? Kuzwakala sengathi uyayilinga, yebo okumnandi! Futhi futhi kujabulise kakhulu, ngoba ungase uzwe futhi ubone ku-webchat izinto eziningi ezithakazelisayo. Ngisho nokubuka ngaphakathi kwefulethi lomunye umuntu kubangele isithakazelo sangempela.
Ividiyo yevidiyo engxoxweni iyindawo ekahle yokuseka oxhumana nabo bangaphandle. Ungakwazi ukupakisha izikhwama zakho kanye ne-hitchhike kulo lonke elaseYurophu, kodwa kuzodingeka isikhathi nemali. I-roulette yengxoxo iyakwazi ukusheshisa futhi ikhululekile ukuxhumana nanoma yimuphi umuntu onenkulumo efanayo yewebhu njengoba unayo. Kulula kakhulu ukusetha ingxoxo: iya kuso, chofoza ku- "Wonke amazwe" bese ukhetha izwe. Ake kube namuhla - eJalimane (eJalimane).ukuhambisana nomunye. Ngaqaphela lokhu ngisemncane lapho ngizwa indaba yokuthi umkhulu wami omkhulu ngesikhathi seMpi Yezwe I ethathwe amaJalimane, wasebenza isikhathi eside epulazini lomuntu ocebile, futhi wamthanda kakhulu ngomsebenzi wakhe onzima kangangokuba wanquma ukushada nendodakazi yakhe . Kusukela ngesikhathi sokuthunjwa umkhulu-ugogo wami usevele eshadile futhi waze wayenabantwana abaningana, lo mshado awuzange kwenzeke, kodwa indaba esasihlala ngayo kanye namaJalimane (iWWII - engabalwa) yayisungulwe kahle emndenini wethu nasengqondweni yami.
B ingxoxo ye-German roulet Ngilandela ukuvela okusha. Ngangifuna ukuqonda ukuthi yiziphi iziJalimane zanamuhla; Ngangifuna ukuxhumana nabafana namantombazane. Kuyinto edabukisayo ukusho, kodwa nginesithakazelo kulokugcina ngokuqondene nokubukeka: Ngangifuna ukuchitha noma ukuphikisa inkolelo yokuthi amadoda aseJalimane ahle kakhulu kunabalingani bawo. Isikhathi sokuqala sasinzima, njengoba i-roulette yaseJalimane ihlale iphoqa abameleli bobulili obuqinile - babo bonke ubudala nobuzwe (iJalimane yanamuhla ayiwona amaJalimane kuphela, kodwa futhi amaRashiya, amaJuda, amaTurkey, ama-Arabs). Khona-ke lamantombazane aqala ukuhlangana, ngemva kokukhuluma nobani engangikubona ukuthi umkhulu-omkhulu-umkhulu wayengatholi owesifazane waseJalimane ngisho noma engashadile. Kodwa uma ngisendaweni yakhe, isiJalimane ngokuqinisekile ngeke senqabe ukunikezwa kwesandla nenhliziyo: ngoba ingxenye enkulu ababameli baseJalimane babenhle futhi. ehloniphekile. Ngingasho ngisho ukuthi ziyalwe kulezo zimiso ukuthi abantu abavilapha kuphela eRussia abahleki.
I-webchat yesiJalimane, eyaziwa ngokuthi i-roulette yengxoxo eJalimane, yangibonisa isici esisodwa esiyingqayizivele kumaJalimane: ngothando lwabo lomsebenzi wangaphakathi nangaphandle, bawugcina indlu ingavamile. Lapho ngifika engxoxweni yevidiyo yaseJalimane ku-intanethi, ngezinye izikhathi ngigijima izingubo ezihlakazekile noma amapuleti angahlanjululwa. Kodwa-ke, esitokisini esingajwayelekile, ikakhulukazi angaphandle, ne-charter yayo akufanelekile ukukhuphuka. Kuyinto enzima ukucabanga ukuthi ingxoxo yevidiyo yaseJalimane ibonisani engxenyeni yami. Ngicabanga ukuthi ngokushesha nje lapho ngizohlanza kancane ekamelweni lami, i-roulette yaseJalimane ye-chat izophinde iphindwe kumodi yami yokusesha ye-interlocutors evela eJalimane.
I-roulette yokuxoxa 18 yabantu abadala
Ukuphila kwethu ngezinye izikhathi kungalindelekile futhi kugcwele izimanga. Uma, ngokufuna injabulo yakho, usulahlekelwe yithemba lempumelelo, isiphetho sikunikeza ithuba elilodwa lokujabula!
Ingxoxo yevidiyo amahora angu-24
Ukubhala abantu ngokuya ngokuya ku-intanethi - okunjalo yiqiniso langempela. Futhi uxoxe nge-roulette amahora angu-24 (ungathola elinye igama - ingxoxo yevidiyo 24) - lokhu kungenye yamathuluzi angcono kakhulu kule nqiniso. Ake ngikutshele kabanzi mayelana nakho okuhlangenwe nakho kwami.Ukuqonda lokho ngokugcwele, sibhale ikhodi ye-Videotailer24 ukuze isebenze kuwo wonke amadivayisi: ama-desktops, ama-laptops, amaphilisi kanye nama-smartphone nganoma yisiphi isistimu yokusebenza. Sibheke ngokukhethekile i-OS-Android ne-iOS okwamanje ethandwa kakhulu. Funda kabanzi mayelana nengxoxo yethu yevidiyo engu- ku-Android.
Imigomo, ayikho umehluko phakathi kwengxoxo yewebhu ku-Android noma, asho ukuthi, ku-Windows. Isimiso sokusebenza nokusebenza kuyafana:
Ungasebenza ngaphandle kokubhalisa futhi mahhala.
Ungabhalisa futhi uthole i-akhawunti yakho siqu. Ungabeka izithombe zakho siqu kulo, futhi omunye wabo (udinga ukucacisa ukuthi ubani) uzovela kukhasi eliyinhloko le- "Videorulet24" futhi uzotholakala ukuze abuyekezwe kubo bonke. Ngokuchofoza kuso, umsebenzisi ungena ku-akhawunti yakho siqu, lapho angashiya khona umlayezo wakhe - isibonelo, ngemininingwane yakhe yokuxhumana.
Video Roulette ku-Android ikuvumela ukuthi ukhethe izwe abasebenzisi ongathanda ukuxoxa nabo.
I-interlocutor ikhethiwe ngokungahleliwe (i-roulette efanayo!)
Imingcele kuphela ingxoxvo yevidiyo engu- ku-Android kusuka ku-Windows - ekubonisweni esikrinini, ngoba ubukhulu bokugcina ku-PC nakwi-smartphone buhluke kakhulu kokubili ngobukhulu obukhulu nakwesilinganiso sesici. Ngaphezu kwalokho, uma kudeskithophu ububanzi bungaphezu kokuphakama, bese ucingo luhlukile.
Uma ufaka i-roulette yengxoxo nge-smartphone, ungase ubhekane nobunzima obuningi bokuhamba (lokhu kuncike kakhulu esimeni esithile segajethi). Kule ndaba, iseluleko: ukuze ukukala roulette ku-Android kungabangeli noma yikuphi ukuphazamiseka, faka isicelo kwi-smartphone yakho. Landa ingxoxo yevidiyo ku-Android, futhi uyisebenzise, ​​ayikhululekile. Lokhu kunikeza?
Okulula kokuhamba. Zonke izinkinobho zizobonakala, ngakho-ke kulula ukuchofoza kubo.
Isicelo sidinga i-RAM encane nezinye izinsiza zegajethi, futhi i-roulette yengxoxo ku-Android izohamba ngokushesha kunokuba uvula inguqulo yesiphequluli. Ngamamodeli wefoni ephansi, lokhu kuyinzuzo enkulu.
A yonke indawo, ukusetshenziswa kwe "VideoLet24" kugajethi yeselula kunekhwalithi eyodwa ewusizo: ungabonisa i-interlocutor yakho hhayi nje ingaphakathi lendlu yakho, kodwa futhi nezigcawu ezivela empilweni yedolobha lakho. Kuvela njengokungathi ukudubula ku-intanethi ngekhamera yewebhu, kuphela, ngokungafani nalokhu okulandelayo, ividiyo izokwenziwa ngaphandle kwephuzu elilodwa - futhi i-interlocutor ingase ibuze ukuthi impela izobonisani. Ngokuqinisekile amakamelo okuxoxa ngevidiyo ku-Android athandwa nabo bonke abasebenzisi. Lokhu kwenza kube lula ukuthola abantu emhlabeni jikelele abazovuma ukuqhubeka nokujwayela okusheshayo. Futhi njengoba isaga esihlakaniphile sithi: "Awunawo ama-ruble angu-100, kodwa unabangane abangu-100."Ngakho zama ingxoxo ye- yevidiyo ye-Android futhi ujabulele kalula!
Indlela yokufinyelela ingxoxo yevidiyo kusuka ku-
Siyabonga ikhono lokuxhumana ngaphandle kokubhalisa, ingxoxo yokuxoxa isithandwa kakhulu. Yiqiniso, abantu abaningi bafuna ukuxhumana ku-chatrulette hhayi nje ukuhlala ekhaya ngemuva kwe-PC noma i-laptop, kodwa futhi ngamadivayisi eselula - ifoni noma ithebulethi.
Inguqulo yeselula ye-chat chat roulette
Ngifuna, njengengumfana omude wengxoxo yewebhu, ukukhuluma ngemisha elula evelele engxoxweni yevidiyo. Lona ikhono lokuxhumana ne-smartphone yakho! Futhi akunandaba ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza luyi-Android noma iOS. Abanikazi be-Smartphones abangenasici se-Windows, ngokwesibonelo, kusukela ochungechungeni lwe-Lyumiya.
Ividiyo yokuxoxa nge-Chatroom
Uma uvela e-Kazakhstan futhi awukwazi ukuthola ingxoxo efanelekayo yokukhulumisana nabangane abasha, siyajabula ukwethula ingxoxo yevidiyo GYR-GYR.
Ingxoxo yethu ihlanganisa abantu abaningi abathandekayo nabanobungane abavela emadolobheni ahlukene aseKazakhstan.
Kwakha abangane abasha - kuhlale kuthakazelisa! Ingxoxo yevidiyo GYR-GYR ikunika ithuba lokuxhumana kuphela futhi lihambelane nomxhumanisi wakho, kodwa futhi ucabangele lowo oxoxa naye, okuyinto enhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, nge-roulette yengxoxo ngeke uphelelwe ukudumazeka okungathandeki lapho uhlangana, njengoba ukukhulumisana kwenzeka cishe kuphila. Lokhu kuhluke kakhulu ukuxoxisana kwengxoxo evamile yengxoxo. Emakamelo okuxoxa evamile, iningi labantu kaningi akubona ukuthi bathi bani. Ngengxoxo yevidiyo ye-Gyr-Gyr, ngeke kube nokumangala okunjalo!
Ukuhlomula okukhulu kwengxoxo kulula futhi kulula ekukhulumisaneni. Ukuze uqale ingxoxo, udinga ukucindezela inkinobho ethi "Qala" futhi iwindi lizovela esibukweni ngesithombe se-interlocutor yakho. Ikamelo lezingxoxo lisebenza ngesimiso sokuphola okungahleliwe, ngakho-ke awusoze wazi ukuthi ngubani ozoba esibukweni. Uma ngesizathu esithile unganelisekile ngolwazi olusha olungavamile, ungahlala uqhubeka nokuseshwa kwe-interlocutor yakho usebenzisa inkinobho "elandelayo". Futhi, ingxoxo ye-GYR-GYR ayiziwa futhi ayidingi ukubhaliswa nedatha yomuntu siqu.
I-chat yethu ye-roulette ngeke ikunike isizathu sokuba nesithukuthezi, ngoba kunabantu abaningi abadala nabasithakazelisayo bezingxoxo abahlala bejabule ukuhlangabezana nokukhuluma ngezintshisekelo zabo. Yingakho ku-Kazakhstan ingxoxo yevidiyo ye-GYR-GYR ithandwa kakhulu futhi nsuku zonke izilaleli zethu ziba ngaphezulu. Izakhamuzi eziningi zaseKazakhstan seziqaphele ukuthi ingxoxo yevidiyo ye-GYR-GYR kulula kakhulu, elula, esheshayo futhi enzima. I-roulette yengxoxo iyithuba elihle kakhulu, ikakhulukazi esigabeni sabantu abangasetshenziselwa ukuhlangana emigwaqweni. Lapha uzothola ithuba lokubonisa ingqondo yakho noma ukukhathazeka, wazi ukuthi kuzoba khona abantu abazokusekela.
I-roulette yengxoxo GYR-GYR - le ngxoxo yevidiyo ngokuyinhloko kulabo abazimisele ukuthatha izingozi futhi banikeze ukhetho kulo mcimbi. Ngemuva kwalokho, akunakwenzeka ukungavumelani ukuthi empilweni yethu izinto eziningi zinqunywa ngengozi. Futhi uma unesithukuthezi noma uvele usungulwe usuku olubi, uma ungenaso isimo sengqondo, uma ufisa ukuthanda uthando noma nje ufuna ukudlala ngothando, uma ungenabo abangane noma ngokuzumayo uzizwa unesizungu - hamba ekamelweni lethu lokuxoxa! Ezingxoxweni zethu uzothola ukubuka okusha okungenakulibalekayo futhi umangale ukuthi impilo yakho izoba lula futhi ijabulise kangakanani!
Video ingxoxo: free chat
I-City - inani elikhulu kakhulu kumuntu wanamuhla. Ukuphila kwethu kunzima futhi ngezinye izikhathi, ngaphandle kokukhulumisana okuvamile, awekho amanye amathuba okukhuluma nabanye abantu, ukuxoxa nganoma yiziphi izinkinga, noma nje wabelane ngemfihlo. Amathuba okuxoxa nge-Roulette akuvumela ukuba uthole umuntu kunoma iyiphi ingxenye yezwe futhi ugcwalise izikhala zokukhulumisana kalula futhi sizikhandle. Khuluma ngengxoxo yevidiyo uma kulungile futhi kuyadingeka kuwe!
Igama elisha "uxoxe": liyini iphuzu?
Ufuna ukwazi ukuthi yini eheha abantu abaningi kuleli gama elisha? Empeleni, konke kulula futhi kucacile:
iyinjabulo yokuxhumana nabantu abathakazelisayo;
online webchat, okuvumela ukuba udale ukukhohliswa kokuxhumana komuntu siqu ebhentshini epaki noma etafuleni le-cafe;
Indlela yokuchitha isikhathi sakho sokuzilibazisa iyathakazelisa futhi iyathakazelisa;
yokuthola indawo ukuze uthole i-interlocutor ezithakazelisayo - fan of cinema noma izincwadi, ezinye izifundo.
Video Roulette ihlanganisa izinkulungwane zabasebenzisi, futhi lokhu kuyinhloko yayo. Ngaphezu kwalokho, le ngxoxo isesiteji lapho ukuthuthukiswa kwenzeka nsuku zonke, futhi konke lokhu ndawonye kwenza ukuba ukukhulumisana kungokoqobo futhi kungenambala, kodwa kwangempela, okujabulisayo, okuhlukahlukene. Ngengxoxo ye-intanethi yamahhala, uzothola okuthile ukuqeda ubusuku obusizi obusika, lapho imvula ingqongqoza i-asphalt ngaphandle kwefasitela, futhi isimo sengqondo sishukumisela ngokushesha ku-zero.
Ukuhamba, ukukhuluma, ukukhuluma ...
Ukuthandwa kukaRoulette - ukuxoxwa kwevidiyo ngaleli gama sekuvele kwaziwa kakhulu ngokwanele - kuba uphawu lwale ndlela yokuxhumana. Ngezindlela eziningi, indima edlalwa yikhompyutha yomphakathi wethu, i-intanethi etholakalayo, nokugcizelela ukugcizelela. I-chatroulette yamahhala iyinjabulo kubazethuli, kodwa kunjalo nabathandi bokuxoxa kuze kube sekuseni.
Ungasebenzisa ingxoxo - ukuhlanganisa okuhlukile. Ngakho, ukuqala ingxoxo, akudingeki ukuba uhambe ngenqubo yobhaliso ende, futhi lokhu kuyamangalisa kakhulu. I-roulette yengxoxo itholakala ngokushesha mahhala, futhi ungaxhuma nomunye umuntu cishe ngokushesha. Inani labasebenzisi likhula nsuku zonke, okwandisa ithuba lokuhlangana nomuntu othakazelisayo futhi bazinikezele izingxoxo ezibonakalayo isikhathi eside.I-analogue yethu ye-Chatroulette yimoto yakho esitimeleni esivela kude, futhi umxhumanisi wakho nguye ohamba naye ofanayo. Izindinganiso ezintsha zokuxhumana ziza eRussia, futhi i-webchat yethu ingenye yezinto ezigqamile.
Inzuzo yesikhulumi samahhala yukuthi noma ubani angasebenzisa yonke imisebenzi yayo. Akudingekile ukuthi ube ngumsebenzisi othuthukile we-inthanethi ukuze ufunde imithetho ye-Roulette engxoxweni. Izinguquko kusuka komunye umsebenzi kuya kwesinye zivele ngokushesha futhi aziqukethe izithiyo, okusho ukuthi abaningi bahileleke kulolu hlobo lokuxhumana.
Umphakathi ohlukaniswe ngokwemigomo yokuba ingxenye eyodwa noma enye yezingxenye zawo ngezinye izikhathi ubeka uhlaka olwanele. Ukuxoxa ngevidiyo kunika ithuba lokuphula yonke imihlangano yenhlalo ekhona futhi ube yilokho okufunayo. Shy and decisive, bright and faded, ohlakaniphile futhi hhayi kakhulu - sonke singabantu abalambile ukuxhumana futhi bathola okusanhlamvu kwabo kuwo. Kukhona abantu abaningi eRussia namuhla abazimisele ukukhulumisana ngendlela ethakazelisayo futhi bathole izinzuzo eziningi ngokwabo.
Ukusebenzisa ingxoxo yevidiyo yaseRussia mahhala kungenzeka manje, akukho sidingo sokungabaza!
I-video ye-Russian ingxoxo yokuthandana
Ukuphola isiRashiya ukuxoxa ngevidiyo kuyisizathu sokushintsha impilo yakho futhi uqale ukuxhumana nsuku zonke nabantu abavela emazweni ahlukene. Ingxoxo yevidiyo yokuthandana izoba ukutholakala kwangempela, futhi iphinde ingenakunyakaziswa ezweni elisha, futhi ukuphola ngokusebenzisa ingxoxo yevidiyo kuyoba umvuzo wesibindi.
Umlingo we-Russian roulette roulette uyatholakala kuwo wonke umuntu!
Umuntu uhlala ezweni lokukhulumisana njalo. Kodwa ukuthi kaningi kangakanani isikhathi esanele noma hhayi umuntu ofanele ukukhuluma nge-sore. Manje zonke izinkinga ezinjalo zixazululwa ngokushesha! Kwanele ukusebenzisa isevisi yokuxoxa nge-roulette yaseRussia nge-intanethi ukuthola ukuxhumana okuhle kakhulu futhi ukhulume nje 9,7004
Ingxoxo yevidiyo engenayo
Iqiniso langempela leminyaka yeminyaka yesithathu - amakamelo okuxoxisana ngevidiyo inthanethi. Izingxoxo nganoma isiphi isikhathi sosuku ziyoletha injabulo kubo bonke abangakatholi isimo sabo sokuxhumana. Ingxoxo yevidiyo ye-intanethi yamadoda nabesifazane abaneminyaka yobudala ehlukene nezimiso zomphakathi - ezintsha kwiWebhu Yonke Yezwe.
I-Roulette yevidiyo: Zama i-Fate Yakho
Video Roulette iyisevisi ethakazelisayo futhi ewusizo evumela ukuthi ukwazi umuntu onentshisekelo ngaphandle kokushiya ikhaya lakho bese uchitha isikhathi sakho sokuzilibazisa ngekhwalithi ephezulu. I-Roulette ingxoxo ngaphandle kokubhalisa ivumela ukuthi uqale ukuxoxa ngokushesha. Wena ngokwakho unquma ubude bobuhlobo obusha futhi ungathwali noma yiziphi izibopho kumlingani engxoxweni ebonakalayo. Isimiso esiyisisekelo sokuhlelwa kwevidiyo yisi-search automatic for a interlocutor efanelekile.Lapho, emgwaqweni ongeyena, singakwazi ukuhlangana nendoda enezintshisekelo zayo ezihambisana neyethu. Futhi kulabo abathanda ukuxoxa kuphela, kukhona izingxoxo. Isihawu kuphela ukuthi akuwona njalo esingabona ukuthi i-interlocutor yethu ibukeka kanjani empeleni. Phela, ku-inthanethi, wonke umuntu uzama ukwakha isithombe esihle kakhulu. Kodwa ungadikibali! Ingxoxo yevidiyo izosiza ukuxhumana ku-intanethi nomuntu ophilayo, hhayi ngomfanekiso onesidlaliso "avatar".
Izimfanelo eziningi ze-inthanethi ekahle interlocutor
Ukuxoxa nge-intanethi futhi ikakhulukazi ukuxoxisana ngokuvamile kusiza abantu abanohloniphekile ukuba baziveze ngokwabo, balahle izinkinga zokuxhumana futhi benze abangane abasha ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba, futhi mhlawumbe uthando lokuphila. Kodwa futhi kwenzeka ukuthi singabanjwa yi-interlocutor "enobuthi", ngemva kokuthi "ngikhulume" naye okungewona into engxoxweni yevidiyo - Angifuni ukuhlala kuyi-intanethi! Ngabe-ke, ukuhlukanisa kanjani phakathi kwe- "trolls" kusuka kuma-interlocutors ananele ngokwanele? Yiziphi izimfanelo okufanele umphikisi wakho abe nazo engxoxweni yevidiyo nokuthi uzibone kanjani ngokuqondile ekukhulumisaneni kwi-inthanethi, lesi sihloko sizokutshela.
Izici ezifihliwe nezinzuzo zezingxoxo zevidiyo.
Iyiphi ingxoxo yevidiyo? Labo abajwayele ngaphakathi ngaphakathi nokuzikhethela komsebenzi walolu hlelo lokusebenza bangakhetha izimpendulo zalo mbuzo ngezindlela ezahlukene. Abaningi bakholelwa ukuthi lena yindlela nje yokuchitha isikhathi sakho sokungcebeleka, lokhu kungukuzijabulisa, akukho lutho. Kodwa-ke, kukhona nalabo ababengabona impumelelo eyigugu nakakhulu amathuba ekuxoxweni kwevidiyo. Thola esinye isigamu sakho, wandise ama-horizons akho, ngokuzumayo uzitholele engxenyeni ehlukene yeplanethi. Futhi akusikho konke. Indlela yokufunda ukukhomba inzuzo enkulu ekusetshenzisweni kwengxoxo yevidiyo?
Innovation, njengendlela entsha yokuxhumana
Ufuna ukukhuluma futhi ungafuni ukuchitha isikhathi ekuhambeni okude, khona-ke ingxoxo yewebhu ingcono kakhulu kuwe. Ngesizo salesi sevisi, izwe lonke livulela wena, awunayo imingcele, ungakhuluma okuningi ngendlela oyifunayo, uhlale unesithakazelo ekukhulumeni nabantu abahlukile. Asikho isidingo sokucabanga ukuthi ungabhala kanjani, ukuthi yini ongayibhala, ngabe unesithakazelo ku-interlocutor yakho - vele uxhumane ngekhamera yewebhu bese ujabulela ingxoxo.
I-Chatterelle iyindlela enhle yokuhlangana nendoda ye-congenial.
Iyini ingxoxo engaziwa yokuthandana ekhangayo kubasebenzisi? Mhlawumbe iqiniso lokuthi wonke umuntu oba umhlanganyeli angakwazi ukukhululeka ngokugcwele futhi abe yedwa. Ngesikhathi esifanayo, akunandaba nhlobo ukuthi isimo sakhe empilweni yangempela, kungakhathaliseki ukuthi ungumndeni noma umuntu ongewona umndeni - engxoxweni yevidiyo, wonke umuntu uyalingana, ovulekile kakhulu, futhi omele ngokuphelele kunoma ubani.
Isihambeli sesayithi yethu sithola kwi-interlocutor ekhethiwe futhi siqala ukuxhumana naye, uma engathandi i-interlocutor, angashintsha kalula abe yinye (ukwenza lokhu, chofoza inkinobho elandelayo).
Izici eziningi zengxoxo yethu:
I-chat yethu ye-roulette ihlukile futhi ihluke ngokuyisisekelo kwamanye amakamelo okuxoxa. Ngezansi ungathola izinzuzo ezingu-5:
Ukubhaliswa okudlule - ukuze uqale ukusebenza nesevisi ongadingi ukuchitha isikhathi esiningi. Ukubhaliswa kwenziwa emaminithini angu-5 nje kuphela
I-access-clock access - ungangena ingxoxo nganoma isiphi isikhathi sosuku bese uzithola umuntu: indoda noma owesifazane.
Izihambeli ezinkulu zezikhangiso - inani elikhulu labasebenzisi abavela emhlabeni wonke beza kusayithi nsuku zonke. Ungathola u-interlocutor e-USA, eDenmark, e-Great Britain, eRussia, eSpain, e-Italy njalonjalo ku-9 7008
Isesho oluhle lwabangani - akudingeki uhlale kusayithi lonke usuku ukuhlangabezana nabantu abathakazelisayo. Qopha umlayezo wevidiyo kubasebenzisi bese usitshela ngawe. Abantu bazobuka irekhodi bese bexhumana nawe. Ungasesha futhi abangane ngendlela efanayo.
Ukukhethwa kobulili - kuphela kithi ongakhetha ubulili be-interlocutor bese uhlunga abantu ongafuni ukuxhumana.